Usuku lwaTata lube yimpumelelo | News24
Usuku lwaTata lube yimpumelelo
IZITHOMBE: nosipho mkhize UNkk Gwala noNks Gugu bephethe amaphasela okudla abawanikele emphakathini ngosuku lukaMandela eSt Clements Home Based Care.
ABE-St Clements Home based Care banikele isikhathi sabo se-67 Minutes, ngokumema abakwa-South African Social Security Agency (SASSA), aboMnyango wezaseKhaya nabakwa-wyebank umasingcwabisane, ukuthi bezoxoxisana nomphakathi ngendima abayidla emphakathini.
Okhulumela iSt Clements uNks Zanele Mvune uthe benze into ehlukile kulo nyaka, njengoba bebona indlela umphakathi onezinkinga ngayo uma bexhumana naleminyango.
Uthe “Sicele izihambeli zethu zixoxisana nomphakthi ukuze uqonde ukuthi yiluphi usizo olutholakala kuleminyango nokuthi umphakathi uthole ithuba llokubuza ngezinkinga obhekene nazo uma beya kule minyango. Asigcinanga lapho ngoba umuntu ngamunye uthole iphasela lokudla ebeline kabishi, amazambane, u-fish nokunye. Abantwana banikezwe amajezi okuthi befudumale ngalobusika,” kusho yena.
Usuku luphele ngomculo omnandi obuvela kwiqembu laKwamashu elizwa ngokuthi yi-Ntethelelo Musical Group